Moments Neshamwari 56
Chii chinonzi chirwere uye chii chinobatanidza mabhakitiriya nacho?
Chirwere chemuviri mamiriro ezvinhu umo bumbiro rezvikamu zveimwe kana nhengo dzomuviri richishungurudzwa kusvika padanho rekuti kushanda kwechinhu kana nhengo inokanganisa kana basa reimwe nhengo richikandirwa kunze kwazviri. hukama neimwe kana imwe nhengo. Mhedzisiro yacho ndeyekuti izvo zviri muchisikigo hazvisisiri mukuwirirana nehukama hwevanhu-ndiko kuti, pamwe nekuwirirana, hwaro hwekuumba hwaro hwemuviri.
Chirwere chinokonzerwa nokudya zvisina kufanira, kunwa, kufema, kuita uye mafungiro asiri iwo. Chirwere chinotadzisa munhu kuita zvinhu zvemberi uye zvinoshanda nhengo dzemuviri.
Mabhakitiriya fungi, microscopic zvidyarwa, kazhinji yetsvimbo-kunge, lance-like, tambo-kunge maburi. Hutachiona hunonzi hunokonzeresa hosha dzakawanda dzinotapukira uye dzezvirwere zvisiri kutapukira, nezvirwere zvemubumbiro zvakare.
Nepo mabhakitiriya ane zvakawanda zvekuita nezvirwere, mabhakitiriya haasi iwo anokonzera chirwere. Mabhakitiriya anokura nekukurumidza apo mamiriro ekuwedzera kwavo anopiwa, uye aya mamiriro anounzwa nemafungiro asina kunaka, kuita, kufema, kudya uye kunwa. Hutachiona muhuwandu hwakaringana kuburitsa chirwere haugone kuvepo kana munhu asina kuvapa nzvimbo yakaorera yekukura kwavo mumuviri wake. Kazhinji, zvakangofanana yunifomu, putrefaction uye kupera simba mukati mekuchera uye masystems ari ekutanga anokonzeresa mamiriro ezvinhu pasi payo apo mabhakitiriya anowana pekugara pakanaka uye kukura.
Chii chinonzi kenza uye chinogona kurapwa, uye kana chinogona kurapwa, chii chirwere?
Kenza izita rakapihwa kune yakagadzwa nyangwe nyowani kukura mumuviri wemunhu, iyo inokura ichirashikirwa nechero yakajairwa tishu, uye kazhinji inouraya. Kenza ndechimwe chezvirwere izvo zviri kuwedzera nekufambira mberi kwebudiriro. Budiriro inoberekesa zvirwere, zvisinei nekuzvidzivirira nekurapa izvo zvinotora nzira dzechirwere dzaive dzakakurumbira munguva yakapfuura. Ihwo hwepedyo hupenyu hwevanhu huri kumhuka uye maitiro echisikirwo ekurarama mashoma achave ezvirwere; asi iyo yakakwira yakavhuna muviri uye inopera kubviswa kubva pazviri nyore, zvichangoita kuti zvive nyore kuzvirwere. Nekufamba kwenguva, mafomu ezvirwere anogadzikana zvisati zvave kuzivikanwa, uye zvirwere zvinowanzoitika nguva nenguva. Iyo yepamusoro yekuvandudza kwepfungwa inonyanya kukanganiswa nechirwere iyo muviri uchave uri pasi imwechete kana semamiriro ezvinhu epanyama. Makumi mapfumbamwe ezana ramakore apfuura chirwere chitsva, chaizivikanwa sa la grippe, chakaoneka uye chakapararira nekukurumidza pamusoro pechikamu chikuru chechikamu chenyika chakabudirira. Nenzira imwecheteyo zviitiko zvegomarara zvinonzi zviri kuwedzera.
Kune sero yekenza iri yemuviri. Kune zvakawanda zveizvi mune munhu wese, asi kazhinji zvinogadzirwa, uye saka zvinoramba zvisingacherechedzwe. Kune imwezvezve chirwere chegomarara, uye icho chisiri chemuviri, asi chiri chezvemweya. Iyo hutachiona inowanzove iripo mumuviri we astral, asi ine latent; ndiko kuti, hazvikonzere kukura kwesero rekenza. Mamwe mamiriro ezvinhu anodiwa pachiitiko uye nekuwedzera kwegomarara rehutachiona. Maviri emamiriro aya anowanzo mune humbowo mamiriro emuviri wemuviri wakakora, uri hunhu hwemakore makumi mana zvichikwira, uye chimiro chepfungwa chinoratidzwa zvakanyanya nekutya. Naizvozvo, kutya uye zera remakumi mana rinofarira kugadzirwa kwechirwere chegomarara uye nekuvandudza uye kuwanda kwemasero ekenza.
Kenza inogona kurapwa uye yave kurapwa. Mhinduro kumubvunzo uyu uye kurapwa kwegomarara kwakatsanangurwa mukati "Nguva ne Shamwari" muchinyorwa che SHOKO, Gunyana, 1910, Vol. XI., No.6.